Wiil Soomaali ah oo lagu dilay Canada | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wiil Soomaali ah oo lagu dilay Canada
Maydka wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Faysal Bashiir Xiis Khalaf, ayaa laga helay guriga uu ka daganaa magaalada Toronto, ee dalka Canada, isaga oo ay ku yalaan dhaawacyo.
Waa dilkii Afaraad oo ka dhaca gudaha Canada muddo tobaadyo gudahood.
Dhismaha 2067 oo ka tirsan xaafad-da Isliton ee magaalada Toronto ayaa ah goobta uu dilkani ka dhacay ,waxaana ka horeeyay dil loo adeegsaday Rasaas oo loo gaystay wiil isna Somali ah oo lagu magacaabi Jiray Yuuusuf Xaaji , kaasi oo isna lagu dilay isla Bariga magaalada Toronto.
Booliska Magaalada ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno ku aadan dilkan isla-markaana ay waqti dhow warbixin ka soo saari doonaan dilkan ,xilli uu jiro kala qaybsanaan Dhanka fikirka ah oo u dhaxeeya Somalida degan dalkaas.
“Sanadkan 2016- ,waxaan dhihi karnaa waa qofkii 8-aad ama sagaalaad oo lagu duugayo halkan , waa arin runtii musiibo ah oo ku habsatay bulashadeena” ayuu yiri Shiekh Abuukar Sheikh Xuseen, oo ah imaamka Masjidka Khalid Ibnu Waliid, oo kuyaala galbeedka magaalada Toronto.
Imaamka ayaa sheegay in booliska aysan wax-ba ka qabin karin arintan hadii aysan la shaqayn bulshadu.
Waxaa uu tilmaamay in tirada dhimashada arintan ay ka sii badan karto hadii bulshada Soomaalida ah aysan ka midoobin tafaraaruqa ka dhex-jira.
Ugu danbayn, dilkan loo gaystay labadan wiil Soomaalida ah ayaa imaanayaa iyadoo todobaadkii hore magaalada Ottowa lagu dilay laba gabdhood oo walaalo ahaa ,kuwaasi oo dilkooda loo xiray walaalkood.
Previous articleMadaxwaynaha oo madaxtooyada ku qaabilay Ilhan Cumar
Next articleDooni ganacsi oo ku degtay meel u dhow Boosaaso